Cabitaan Qaabkan ayaa ah is biirsaday Chia, fikradda ugu weyni waxay ahayd qaabeynta is biirsaday oo leh dhowr weji dhadhamis. Chia waxay nuugi kartaa oo keydsan kartaa dhadhan kasta iyo midab sidaa darteed marka qofku sameeyo is biirsad oo ay la sameyso Firefly waxay la kulmi kartaa dhadhan kala duwan tallaabo. Qiimaha nafaqada ee sheygan ayaa ah mid aad u sareeya marka la barbardhigo kuwa kale ee is biirsaday taasina waa sababta oo ah qiimaha nafaqada ee Chia ee sareeya iyo kaloorida oo hooseysa. . Naqshadani waa cutub cusub oo taariikhda cabitaannada iyo is biirsaday.
Khamiis 26 Bisha Shanaad 2022
Caaryada Barafka Dabeecadu had iyo jeer waxay ka mid ahayd ilaha ugu muhiimsan ee dhiirigelinta naqshadeeyayaasha. Fikradda ayaa ku timid maskaxda naqshadeeyayaasha iyaga oo eegaya meesha bannaan iyo muuqaalka 'Milk Way Galaxy'. Qaabab badan oo suuqa ku jira ayaa diiradda saaraya samaynta barafka ugu cad laakiin naqshadeynta la soo bandhigay, naqshadeeyayaasha ayaa si ula kac ah diiradda u saaray qaababka ay sameyaan macdanta halka biyuhu ay u beddelaan baraf, si ay u caddeeyaan naqshadeeyaashu inay beddelaan cillad dabiici ah. galay saamayn qurux badan. Naqshadani waxay abuurtaa qaab wareeg ah oo wareegaya.
Filterka Sigaarka Digniinta X, waa digniin ku socota sigaar cabayaasha si ay uga dhigaan inay gartaan waxa ay naftooda ku sameynayaan inta ay sameynayaan. Naqshadani waa jiil cusub oo shaandhaynta sigaarka ah. Qaab-dhismeedku wuxuu u noqon karaa beddel wanaagsan oo loogu talagalay xayeysiisyada qaaliga ah ee ka dhanka ah sigaar-cabista wuxuuna saameyn badan ku yeeshaa maskaxda dadka sigaarka cabba marka loo eego xayeysiinta kale ee xun. barkad kasta sawirku wuxuu u muuqan doonaa mid cad cad markaa buroo kasta waxaad arki doontaa wadnahaaga oo mugdi galay oo waad ogtahay waxa kugu dhacaya.
Baarkinka Baaskiilka Isbadalku
Talaado 24 Bisha Shanaad 2022
Baarkinka Baaskiilka Isbadalku Smartstreets-Cyclepark waa goob iskuxiran, iskuxiran baaskiil loogu talagalay laba baaskiil oo ku habboon daqiiqado si loogu suurogaliyo hagaajinta deg degga ah ee xarumaha baabuurta la dhigto ee ku yaal aagagga magaalooyinka iyadoo aan lagu darin goobta waddada. Qalabku wuxuu gacan ka geysanayaa yareynta xatooyada baaskiilka waxaana lagu rakibi karaa xitaa waddooyinka ciriiriga ah, iyadoo laga sii daayo qiimaha cusub ee kaabayaasha jira. Ka samaysan bir aan nadiif ahayn ayaa qalabku u noqon karaa midabka RAL midabkiisuna astaan u yahay Maamulka Deegaanka ama kafaala-qaadeyaasha. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu caawiyo in lagu aqoonsado marinnada Wadooyinka. Waxaa dib loo qori karaa si loo waafajiyo cabir kasta ama qaab kasta oo tiir ah.
Isniin 23 Bisha Shanaad 2022
Baakooyinka Magnesium Hawlaha Hay'adda Arome ee ku saabsan aqoonsiga garaafka iyo khadka farshaxanka ee baakadaha Kailani waxay ku saleysan yihiin naqshadeynta ugu yar iyo nadaafadda. Minimalism-kaani waa mid la jaan qaada sheyga kaliya ee ka kooban, magnesium. Hal-ku-dhigga loo doortay waa mid xoog badan oo la taaban karo. Waxaa lagu gartaa labadaba xoogga magnesium-ka macdanta iyo xoogga badeecada, taasoo dib ugu soo celisa muhiimadda iyo tamarta macaamiisha.
Axad 22 Bisha Shanaad 2022
Dhalada Khamriku Aroma waxay u sameyneysaa garaafka jaantusnimada muraayadda aruuriyaha Gabriel Meffre kaas oo u dabaaldegaya 80 sano. Waxaan ka shaqeynay qaabeynta astaamaha 30s ee waqtigaas, oo garaaf ahaan lagu sawiray haweeney koob galaas ah. Taargooyinka midabbada loo isticmaalay waxaa lagu caddeeyaa embossing iyo foil stamping si loo xoojiyo dhinaca aruuriyaha dhinaca aruurinta.
Jimco 20 Bisha Shanaad 2022
Cabitaan Caaryada Barafka Filterka Sigaarka Baarkinka Baaskiilka Isbadalku Baakooyinka Magnesium Dhalada Khamriku